Indlela ukukhetha igama UMFANA inja
Khetha isidlaliso lesifanele isilwane sakho - umsebenzi ngisho simple. Okokuqala, kufanele sinake lozalo, zohlobo, umbala kanye ubulili of the pet. Izidlaliso izinja abafana namantombazane asondele isilwane sakho. Zesidlaliso "Ball" asifanele Afghan Hound, kanye ngokuba mutts mongrel uzwakale igama yimikhuba kakhulu okungalungile.
Siza uthole isidlaliso efanelekayo enhlanganweni Canine. izinja purebred kukhona khona incwadi ethile igama kumelwe uqale khona. It kungaba kuqukathe eyodwa noma ngaphezulu amagama, okubaluleke kakhulu, ukuba kakhulu kuvumelane nalo.
Lapho ekhetha igama izinja abafana kufanele sikhumbule nakanjani mayelana lokuthi esikhathini esifushane isilwane sakho uthola amadala, futhi uwena akunakwenzeka ukuba ufuna Rottweiler yakho esesabekayo basabela isidlaliso amnandi ngocingo amtshele indlela amthanda ezifana "Masik".
Uma isilwane kuba uhlobo olungavamile, cabanga noma podyschu kuye okuthile yokuqala, kodwa akunzima kakhulu ukuba amemezele. Inja yakho cute little okufanele ayasabela. Cabanga mhlawumbe kuyoba nzima kakhulu ukucabanga igama lakhe. Nokho kungase kube okukhethwa kukho uma igama isilwane nje abayithandi. Kulokhu, lo zemfundo inqubo noma habituation isikhathi kuyokwenzeka nobunzima.
Mhlawumbe uke uthenge isilwane, futhi seluvele isidlaliso. kungaba ngempela yimpumelelo intandane inja, kulesi simo, inkinga nge kwencazelo yegama ayisekho kwayona.
Zama ukwenza isilwane sakho ivelele phakathi kwezinye izinja hhayi kuphela ukubonakala kwawo uzilungise noma collar yokuqala, kodwa egqoka ngegama lakhe siqu, okuzokwenza ukwaba yona isisindo ingqikithi.
Ukunakekela kukhethwa igama kuyadingeka ngoba abahlaseli ingakwazi ungekho lesikhashana ezikhanga isilwane sakho ngokwakho ngenhloso ukuyenga ebe, ikakhulukazi uma uhlobo encane futhi kuyabiza. Futhi ungakhohlwa ukuthi, behamba epaki noma uye endaweni engaphandle ngokuvamile kakhulu kukhona izidlaliso abafana izinja washaywa. inja yakho kungenzeka udidekile lapho ayelizwa emakhoneni ezahlukene kwepaki igama layo.
Nakani ubunjalo umngane wakho ukuba izici zangaphandle yayo. Uma unesikhathi uhlamvu ohluphayo, ukubukeka ukuhlukumezana sibukeke enamandla, dogs amagama abafana ishede kumele ngokuvumelana ubuntu bakhe. Kumele kube sonorous futhi noma kunjalo hhayi saccharine.
Akungabazeki ukuthi izinja igama njengophawu zezinkanyezi waba ngaphansi kokubuswa okuyinto yenziwe, uzoqhubeka kuthinte isimo sawo nokuziphatha. Uma ukhetha ukuba adalule lwabo. inja, lapha futhi kubalulekile ukukhetha ngendlela efanele. Isidlaliso izinja umfana kufanele umsize kule nqubo yokufunda. inhlanganisela Ifonetiki imisindo egameni isilwane ukukutholela isiqondiso eziyisisekelo ukuziphatha isilwane sakho.
Ukuze isiphetho isilwane into ihamba kahle, igama kufanele ukhethe izinto ngesikhathi osithandayo, kodwa kahle wacabanga. Ngakho kanjani shayela isilwane sakho?
Izidlaliso izinja nabafana kufanele likusize ekuphatheni isilwane sakho nge amehlo akhe kumuntu wakho. Wakhe isidlaliso - igama ajwayelekile. I sobala, emifushane kakhulu kangaka, ngokushesha ke uzokhumbula umngane wakho ezine-ezinemilenze futhi ufunde ukuhlukanisa kusuka kwamanye amaqembu nemisindo.
It is hhayi Kunconywa ukuba ushayele inja amagama abantu noma isidlaliso, neyayingaphansi abazali bakhe. Mhlawumbe ufuna isilwane sakho esisha kukukhumbuza esedlule umngane ezinezinyawo ezine salowo oshonile. ukukuxwayisa Ngifuna! Khumbula ukuthi uma ukuyibiza ngendlela efanayo, angakwazi ukuphinda isiphetho sakhe esidabukisayo.
Amagama abafana emelelwa uhlu enkulu izinja ku-intanethi, kodwa zama ukuba akwazi ukusungula into yakhe entsha, yasekuqaleni futhi eyingqayizivele. Ishayela inja igama eliphelele, uthuthukisa lokujeziselwa Uyibheka futhi esiqinile ukuqaliswa amaqembu. Ngakho phendukela isilwane sakho kumele kube ngezikhathi ezithile: ekucecesheni, uzoshiya indlu ngedwa uma ungajabule nge umkhuba wakhe. Kwezinye izimo, ungasebenzisa amagama isilwane ukuba ubonise uthando lwabo.
Indlela igama umfana upholi-upholi noma intombazane
Kungani amakati ukulala emilenzeni, futhi kungakhathaliseki ukuthi zinhle
Danio pink - inhlanzi enkulu ukuba multi-tank
Ukudla "Probalans" inja: isakhiwo, izici, ukubuyekezwa abanikazi
Scott Adkins: ukuqeqeshwa - izindlela ephumelelayo kuloyo ifomu enhle ngokomzimba of
Namanabukeni ngoba izinja - hhayi ukungcebeleka
Ithebula hlupha: kagesi, amalahle, roaster
Izimpahla ezingabonakali zebhizinisi
Njengoba ama-beaver anakekele izingane zabo. Indlela yokuphila endle
Ungamsiza kanjani UPnP ku-Windows XP
Ukhuni Solid: okuyinto ke?